Saraakiisha Booliska xukuumadda Anqara ayaa u xaqiijiyay wakaaladda wararka Reuters in tacdiibin loo dilay wariye Jamaal Khashoggi kadibna Meydkiisa lajarjaray oo lagu tuuray meel ka baxsan dhismaha Qunsuliyadda dowladda Sacuudiga ee Magaalada Istanbul.
Ilo wareedyo ayaa u sheegay saxaafadda Maxalliga Turkiga in ugu yaraan 15 ruux horay loogusii diyaariyay gudaha Qunsuliyadda ka hor intii uusan gelin Jamaal Khashoggi si ay howlgalka dilka ay ufuliyaan kadibna ay dalka isaga dhoofeen.
"Qiimeyntayna ugu horraysa waxay muujinaysaa in wariye Jamaal lagu dhaxdilay qunsuliyadda Dowladda Sacuudiga ee magaalada Istanbul oo uu galay thalaasadii lasoo dhaafay,waa latacdiibiyay kadibna Meydkiisa ayaa lajarjaray" sidaas ayuu sarkaal boolis ah u sheegay warbaahinta.
Saxafigan ayaa mucaaraday dowladda Sacuudiga tan iyo markii uu dhaxal sugaha wadanka noqday Max'med Bin Salmaan wuxuuna maqaallo ka dhan ah Nidaamka Aala Sacuud ku qori jiray wargeyska Washingtonpost ee dalka Mareykanka kasoo baxa.
Dowladda Sacuudiga ayaa caan ku ah in dibadda ay ku disho ama ay kasoo qafaasho dhammaan dhinacyada mucaaradka ah balse falkan ka dhacay gudaha Qunsuliyadda Istanbul ayaa lafilayaa in uu khilaaf ka dhax abuuro labada dowladood oo iskula jira isbaheysiga Mareykanku hoggaaminayo ee loogu magac daray Argagaxiso ladirirka.
Hoggaamiyaha Maamulka 'Koonfur Galbeed' Oo Booqasho ku tagay magaalada Marka.